Kala duwanaanta xilliga diirimaadka hawada | Saadaasha Shabakadda
Inta lagu jiro maalinta, kala duwanaanshaha heerkulka aad bay uga yaryihiin astaamaha badda marka loo eego dhulka. The kala duwanaanta ee heerkulka biyaha badda dusha sare guud ahaan wuxuu ka yar yahay hal darajo sidaa darteedna, heerkulka hawada ee ku dhow dusha sare ee badda ma laha kala duwanaansho yar markay deggan tahay.
Taas bedelkeeda, gobollada lamadegaanka ee ku yaal gudaha qaaradaha, heerkulka hawadu wuu kala duwanaan karaa illaa 20 digrii inta u dhexeysa habeen iyo maalin. Xeebaha u dhow, kala duwanaanshahan heer kulka wuxuu in badan ku xiran yahay jihada dabaysha: baaxadda kala duwanaanta ayaa si aad ah loo calaamadeeyay haddii dabayshu ka timaaddo dhulka, laakiin way daciif tahay haddii dabayshu ka timaado badda. Sidoo kale neecawda dhulka iyo badda u janjeera in la yareeyo heerka heerkulka maalinlaha ah.
Sida caadiga ah, marka ay xasilooni jirto, kala duwanaanshaha diurnal ee heerkulka hawada dusha sare ayaa calaamadeysan. Haddii dabayl jirto, hawadu waxay ku kacsan tahay dhumuc aad u weyn, sidaa darteed heerka heerkulka diurnal wuu yarayn karaa. DaruurDhinaca kale, waxay yareyneysaa ballaca kala duwanaanta kala duwanaanta heerkulka iyadoo ka tarjumeysa shucaaca qorraxda oo aan gaarin dhulka dushiisa, halka habeenkii daruurtu u shaqeeyaan sidii “dabool” dusha oo ka qabowda.
Kala duwanaanta heerkulka dusha sare waxaa sidoo kale saameyn ku leh dabeecadda dhulka dushiisa iyo kuleylka kuleylka lakabka hoose. Sidoo kale, dabeecadda dhulka ku hareeraysan ayaa muhiim ah, maaddaama heerkulka meel la siin karo wax laga beddeli karo qulqulka hawo kulul ama hawo qabow oo ka timaadda agagaaraha.
La saamaynta deegaanka hareeraheeda ayaa ka muuqda magaalooyinka waaweyn. Habeennada cadcad oo xasilloon, heerkulka laga diiwaan geliyey bartamaha magaalada wuu ka badnaan karaa S * C kuwa lagu arkay dhulka u dhow. Maalintii, heerkulka waxaa sidoo kale saameeya kuleylka ay bixiyaan dhismooyinka magaalada iyo dhammaan noocyada waxqabad ee halkaas ka dhaca.
Macluumaad dheeraad ah - Xiriirka ka dhexeeya kuleylka iyo heerkulka
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala duwanaanta cimilada ee heerkulka hawada dusha sare
Cimilada ayaa xun, maxaan sameeyaa, dallad ma haysto!